မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါသံရုံးဖွင့်မယ့် အစီအစဉ်တရပ်ကို ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန် ဘာ့ဒ် (John Baird) က ဇူလိုင် လ ၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ ASEAN ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးနဲ့ ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးတွေအတွင်း ကြေညာခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစည်းအဝေးတွေ အတွင်းမှာ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်ပြီး အားတက်ရတဲ့အကြောင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မကြာသေးခင်က တိုးချဲ့ခဲ့တာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံရုံးတခုဖွင့်လှစ်ရေး ကနေဒါနိုင်ငံ က စီစဉ်နေတယ်ဆို တာကို မိမိ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြေညာပါတယ်လို့ မစ္စတာ ဘာ့ဒ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေ၊ လတွေအတွင်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ အနီးကပ် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အကြောင်း၊ ဒီကြေညာချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မိမိတို့အကြားဆက်ဆံရေးမှာ အပြု သဘောဆောင်တဲ့ တခြားတိုးတက်မှုတွေကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
မစ္စတာဘာ့ဒ်ဟာ ဒီနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံဆီ လာရောက်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဆီ သမိုင်းဝင် လာရောက်တဲ့ ပထမဆုံး ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄)
နယူးယောက်မြို့မှာ အီဘိုလာရောဂါ ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတယောက် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာ တကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မိသားစုက သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် …. ထိပ်တန်းသတင်းများ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် ၂၀၁၅ မှာ WHO Ebola ဆေး သိန်းချီ ထုတ်မည် ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ သတင်းထောက် ပါကြီးကို အသေ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း စစ်တပ် ထုတ်ပြန် ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ အင်ဒို သမ္မတသစ်ရဲ့ သမီး အခွင့်ထူးခံဖို့ ငြင်းပယ် သတင်းထောက် ပါကြီးကို အသေ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း စစ်တပ် ထုတ်ပြန် ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti နေ့စဉ်သတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄) မတူတာလေးတွေ ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ ထူးခြားဆန်းပြား